मौलाकालिका फेदीमा आरामदायी वासको लागी होटल ग्रीन फरेष्ट ! – उज्यालो खबर
मौलाकालिका फेदीमा आरामदायी वासको लागी होटल ग्रीन फरेष्ट !
गैँडाकोट । नवलपरासी (पूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं.१ कालिका फेदीमा डेड करोडको लगानीमा होटल ग्रीन फरेष्ट सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीय युवा कमल प्रसाद कंडेलले विदेशमा सिकेको सीपलाई प्रयोग गर्दै होटल ग्रीन फरेष्ट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो ।
आठवटा कोठा र एउटा सेमिनार हल सहित सञ्चालनमा रहेको होटल ग्रीन फरेष्ट पुर्णरुपमा पारिवारिक होटल हो ।
एसी र नन एसी गरी होटलमा आठवटा रुमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने २५० जना क्षमताको सेमिनार हल समेत उपलव्ध रहेको होटलका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कमलप्रसाद कंडेलले बताउनुु भयो । स्थानीय संघसस्थाहरुका कार्यक्रमहरुलाई सजिलोसँग चलाउन सकियोस भन्ने उदेश्यले होटलमा सेमिनार हलको समेत प्रवन्ध मिलाइएका हो ।
टिपिकल नेपाली खाना होटल ग्रीन फरेष्टको विशेषता हो । होटलमा आउने पाहुुनाहरुलाई शुद्ध र सफा खानेकुरा उपलव्ध गराउदै टिपिकल नेपाली खाना उपलव्ध गराउदै आइएको सञ्चालक कंडेलले बताउनुु भयो । त्यसका अतिरिक्त लोकल चिकन र नारायणीको माछाका परिकार समेत हामीकहाँ उपलव्ध छन कंडेलले भन्नुभयो । पाँच जना युवालाई रोजगारी दिएको भन्दै कंडेलले अनुभवी कुकका कारण नवलपुर र चितवनका विभिन्न स्थानबाट पाहुनाहरु आउने गरेको बताउनु भयो ।
मौलाकालिका आउने भक्तजनहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सानो लगानीमा सुरु गरिएको होटल ग्रीन फरेष्टको लगानी हाल आएर ठुलो भएको हो । हामिले मन्दिर जाने भक्तजनहरु बास बस्न नपाएको अवस्था देखेर होटलको सुरुवात गरेका हौं विगतका कुरा सुनाउदै सञ्चालक कंडेलले भन्नुभयो : हाल आएर यो क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या बढेको देख्दा खुसी लाग्छ ।